Banyere Anyị - Shenzhen Hengxing Packaging Machine Co., ltd.
Okwu Nkowa anyi
Shenzhen Hengxing Packaging Machine Co., ltd. guzobere na 2011, bụ onye nrụpụta ọkachamara na-eme nnyocha, mmepe, mmepụta, ire na ọrụ nke ultrasonic tube na-ejuputa na igwe akara, na-ejuputa igwe nkpuchi, plasitc ampoule ndochi na igwe akara akara, igwe nkpuchi ihu nkpuchi, igwe na-ekpo ọkụ plastic, ultrasonic plastic ịgbado ọkụ igwe, plastic agụụ akpụ Machine, ọnya akara igwe, Ada Ada mbukota igwe, wdg
A na-eji igwe nkwakọ ngwaahịa HengXing eme ihe na ihe ịchọ mma, ọgwụ, nri, plastik na ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Imirikiti ngwaahịa anyị enwetala asambodo CE na RoHS.
Hengxing na-etinye aka na mmepe nke teknụzụ ultrasonic, na-ejikọ teknụzụ akpaaka na teknụzụ ultrasonic n'ụzọ zuru oke na igwe mkpuchi plastic, na-emeri nsogbu nke akara ọkụ ọkụ nke ọdịnala, na-emekwu akara ma sie ike. Site na mgbalị na-aga n'ihu nke ndị ọrụ aka anyị, anyị enwetala nọmba nke asambodo patent, na-eduga usoro teknụzụ ultrasonic na nkwakọ ngwaahịa na igwe ịgbado ọkụ.
Hengxing, ya na ndị otu nwere mmụọ na ahụmịhe, dịnụ mgbe niile iji nyochaa ihe ị chọrọ wee nye gị azịza kachasị dị irè ma laghachikwute gị n'oge. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụlọ ọrụ anyị emepụtala igwe igwe igwe abụọ, monodoze tube na plastik ampoule ndochi na akara igwe maka ụlọ ọrụ ịchọ mma. Hengxing na-esochikarị usoro ahịa.
Strong R & D otu, nlezianya ule usoro, na-eme akụrụngwa elu mma.
Ọ magburu onwe ya na ịme akụkụ igwe, nke etinyebere na nkọwa niile, na-eme ka akụrụngwa kwụsie ike.
Na-eweta mmesi obi ike na uru, na-eme ka ndị ahịa nwee afọ ojuju na ozi anyị.